लिपुलेक सडकको विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated May 10, 202060
२८ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालको भूमि लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतले मानसरोवरसम्म जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । त्रिपक्षीय रूपमा समस्याको हल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले चीनले सहमति नजनाउने हो भने त्यस सडकको खास औचित्य नहुने बताए ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि ब्रिटिससँग गरिएकाले यसलाई निष्कर्षमा पुऱ्याउनका लागि सांसदहरूले बेलायतसँग समेत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गृहमन्त्री थापाले बेलायत सरकारसँग छलफल गर्ने कुरा मननयोग्य रहेको बताए ।
सीमा सुरक्षाको संघर्षको टुक्राटुक्रामा मात्रै नभई सिंगो रूपमा लड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले कूटनीतिक प्रयासलाई गति दिने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए ।
उनले प्राविधिक रूपमा मुलुकको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु जरुरी रहेको औँल्याउँदै यसतर्फ सरकारले गम्भीरर रूपमा सोच्ने र आफूले निर्णायक निकायमा पुऱ्याउने आश्वासन दिए ।
गृहमन्त्री थापाले पूर्वशासकको गल्तीको पीडा अहिलेको पुस्ताले भोग्दै गएको उल्लेख गरे । ‘उनीहरूले राष्ट्रियतासम्बन्धी गरेको गम्भीर गल्ती भनेको नेपालको सीमामा भारतीय सेनालाई चौकी स्थापना गर्न अनुमति दिनु हो,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यो गम्भीर र ऐतिहासिक भूल हो, त्यसैको परिणाम हामीहरूले भोग्दै आएका हौँ ।’
चीनको आक्रमणबाट बचाउन भारतले नेपालको सीमामा अस्थायी चौकी राख्ने अनुमति मागेकामा तत्कालीन शासकले अनुमति दिएका र पछि भारतले आफ्नो सेनालाई स्थायी रूपमा राखेको गृहमन्त्री थापाको प्रष्टोक्ति थियो ।
छलफलमा सांसदहरूले तत्कालै सडक निर्माण गरेको क्षेत्रमा सुरक्षाफौज पुऱ्याउन गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । सुरक्षा निकायलाई तैनाथ गर्ने विषयमा छाङरूमा सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) राख्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । सो ठाउँमा पुगने बाटो नभएकाले बनाउने कार्य जारी रहेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ बजेट स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताएका छन्।